အမေးအဖြေကဏ္ဍ | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
1) မြန်မာနိုင်ငံတွင် မည်သည့်ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားများအား မှတ်ပုံတင်ရပါသနည်း။
မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ အရ မှတ်ပုံတင်နိုင်သော ကုမ္ပဏီ အဓိက အမျိုးအစား ၃ မျိုးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ-
အစုရှယ်ယာဖြင့် တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ
ခံဝန်ချက်အားဖြင့် တာဝန်ကန့်သတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ်
တာဝန်ကန့်သတ်မထားသည့် ကုမ္ပဏီ တို့ဖြစ်ပါသည်။
2) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေး ကိုဖော်ပြပါ။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ မည်သည့် ကုမ္ပဏီအမျိုးအစားအတွက်မဆို ၁၅ဝ,ဝဝဝ ကျပ် ဖြစ်ပြီး အများပိုင် ကုမ္ပဏီ အမျိုးအစား အတွက်မူ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်ကြေးမှာ ၂,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပါသည်၊၊
3) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ထုတ်ပေးရန် မည်မျှကြာမည်နည်း။
ကုမ္ပဏီများအတွက် DICA သို့ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကြေးပေးသွင်းပြီးပါက ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်အား ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
4) ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ အနည်းဆုံးမတည်ငွေ သတ်မှတ်ချက် မည်မျှဖြစ် သနည်း။
ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်သည့်အခါ အနည်းဆုံးမတည်ရင်းနှီးငွေ ထားရှိရန်မရှိပါ။ ဘဏ်လုပ်ငန်း ကုမ္ပဏီများ၊ အာမခံလုပ်ငန်း ငွေချေးသက်သေခံ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီးဌာန၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်း အနည်းဆုံးမတည်ရင်းနှီးငွေ သတ်မှတ်ချက်အား လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်၊၊
5) နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်သည့်အခါ နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရှယ်ယာခွဲဝေပုံ (သို့မဟုတ်) ရာခိုင်နှုန်းအချိုးနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ပြဌာန်းချက်များ ရှိပါသလား။
မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား အကျိုးတူဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ရာတွင် ရှယ်ယာခွဲဝေပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး DICA မှ သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိပါ၊၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ အရ ဖက်စပ် လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် အနည်းဆုံးတိုက်ရိုက်အစုရှယ်ယာ သိုမဟုတ် အကျိုးစီးပွားအချိုးကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း ထည့်ဝင်ရမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ အကျိုးတူ ဖက်စက်ကုမ္ပဏီများအတွက် ခွင့်ပြုရှယ်ယာ ခွဲဝေပုံအချိုးနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များအား သိရှိလိုပါက DICA ရှိ ကုမ္ပဏီရေးရာဌာနခွဲသို့ လူကိုယ်တိုင် လာရောက်၍ဖြစ်စေ၊ [email protected] သို့ဖြစ်စေ အီးမေးလ်ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်၊၊
6) အများနှင့် မသက်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီနှင့်အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများတွင် ထားရှိရ မည့်ရှယ်ယာရှင်များ အနည်းဆုံးနှင့်အများဆုံး အရေအတွက်မှာ မည်မျှနည်း။
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းရောင်းချမှုသည် အကန့်အသတ်ရှိပြီး ရှယ်ယာရှင်အရေအတွက်မှာ အနည်းဆုံး (၁)ယောက်မှ အများဆုံး အယောက်(၅ဝ) အထိ ထားရှိနိုင်ပါသည်။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီတွင် ရှယ်ယာရှင်အနည်းဆုံး (၁) ဦး ထားရှိရန်နှင့် အများဆုံးဦးရေ သတ်မှတ်ချက် မရှိပါ၊၊
7) ကုမ္ပဏီများမှ မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် ချက်ချင်း လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုများကို စတင်နိုင်မည်လား။
လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဝန်ကြီးဌာနများမှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိရန် လိုအပ်သော ကုမ္ပဏီများမှလွဲ၍ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခွင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အား ရရှိပြီးနောက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကို ချက်ချင်း စတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ အများနှင့်သက်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများ မဆောင်ရွက်ခင် လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိရန် အလားအလာ ညွှန်းတမ်းအစား ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းဖော်ပြချက် တစ်စောင် တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းလက်မှတ်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းစတင် ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အလားအလာညွှန်းတမ်း တင်ပြပြီးမှသာ အများပြည်သူသို့ အစုရှယ်ယာများ ဖိတ်ခေါ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
8) ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်များ၏ သက်တမ်းသည် မည်မျှဖြစ်သနည်း။
9) Company Extract Form ထုတ်ရန်အတွက် ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရပါသလဲ။
www.myco.dica.gov.mm Website ကို ဝင်ပါ။
ဝင်ရောက်ရန် (Log In) မှာ MyCO Account ID & Password ထည့်ပါ။
Extract Form တောင်းချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကို ရှာဖွေခြင်း (Search Box) တွင်
ထည့်ပြီး ရှာဖွေသည် (Search) ကို နှိပ်ပါ။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Company Register Number) ကို နှိပ်ပါ။
Company Profile မှ အချက်အလက်များ မှာယူခြင်း (Order Document) ကို နှိပ်ပါ။
မှာယူနိုင်သည့် အချက်အလက်များ နေရာတွင် Company Extract-10000 ကို ရွေးပေးပြီး
တင်သွင်းသည် (Submit) ကို နှိပ်ပါ။
Pay by Credit Card (or) Pay by MPU ကို ရွေးပြီး Payment ပေးချေပါ။
Order Document ကို နှိပ်ပါ။
Transaction Report နှင့် အတူကျလာသော View Document Box ကိုနှိပ်ပါ လိုချင်သော Company Extract Form ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီ အချက်အလက် မပြောင်းလဲသရွေ့ Company Extract Form ကို မူလစာမျက်နှာ
(Home) ထဲရှိ မိမိမှာယူထားသော အချက်အလက်များ (My Order) တွင် ထုတ်ယူနိုင် ပါသည်။
10) ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းရန်ဘာတွေလိုအပ်ပါသလဲ။
ကုမ္ပဏီအသစ်တစ်ခုဖွဲ့စည်းရန်အတွက် www.myco.dica.gov.mm Website ကိုဝင်ပါ။
Create Account လုပ်ပါ။
မိမိ Account ဖြင့် Log in ဝင်ပါ။
မူလစာမျက်နှာ (Home) မှ ကုမ္ပဏီအသစ်ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း (Register A New Company/ Entity) ကို နှိပ်ပါ။
ဖြည့်သွင်းနိုင်မည့်ပုံစံများ (Forms available to file online) မှ ပုံစံ-၁(က) (A-1) ကို ရွေးပြီး နှိပ်ပေးပါ။ ပုံစံ-၁(က) Form A-1 ကျလာလျှင် အောက်ပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းပါ-
ကုမ္ပဏီအမည်ကို ဖြည့်သွင်းပြီး၊ ကုမ္ပဏီ အမျိုးအစားရွေးပေးပါ Form ဖြည့်သူ၏ အမည် ၊ N.R.C/ Passport ၊ Email ၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
+ ADD ကိုနှိပ်ပြီး ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်း၏ အမည်၊ N.R.C/ Passport ၊ Email ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မွေးနေ့သက္ကရာဇ် ၊ နေရပ်လိပ်စာ အပြည့်အစုံဖြည့် သွင်းပြီးမှ ဒါရိုက်တာအားလုံး၏ N.R.C / Passport Copy ကို PDF File တဖိုင်တည်း ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီး Upload File တွဲပေးပါ။
အတွင်းရေးမှူး၏ အမည်၊ N.R.C/ Passport ၊ Email ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၊ မွေးနေ့ သက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံ ဖြည့်သွင်းပြီး N.R.C / Passport Copy ကို ဒါရိုက်တာတွေ၏ PDF File မှာ ပေါင်းပြီး တွဲပေးပါ။
ကုမ္ပဏီရုံးခန်း လိပ်စာအပြည့်အစုံ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ဆောင်သည့် လိပ်စာအပြည့်အစုံ ဖြည့်ပေးပါ။ (မှတ်ပုံတင်ထားသော ရုံးခန်းလိပ်စာတူရင် မဖြည့်ပါနဲ့)
MMK (or) USD ရွေးပြီး စုစုပေါင်းထုတ်ဝေမည့်အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်၊ ရှယ်ယာအမျိုးအစား ၊ ပေးချေပြီး ရှယ်ယာတန်ဖိုး၊ မပေးချေရသေးသော ရှယ်ယာတန်ဖိုးတို့ကို ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
+ ADD ကို နှိပ်ပြီး ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးချင်း၏ အမည်၊ N.R.C/ Passport မွေးနေ့ သက္ကရာဇ်၊ နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
အဖွဲ့အစည်း (သို့မဟုတ်) ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီအမည် ၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့်နေရာ၊ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်နေရပ်လိပ်စာအပြည့်အစုံနှင့် ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
၂၀၁၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း (သို့) ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်း ရွေးပေးပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံစည်းမျဉ်းကိုရွေးပါက PDF File တွဲပေးပါ။
Form A-1 ဖြည့်သွင်းသူ၏ အမည်ရေးပါ။
Pay by Credit Card (or) Pay by MPU ကို ရွေး၍ Payment ကျပ် ၁၅ဝဝဝဝိ/ ပေးချေပြီးပါက Complete ကိုနှိပ်ပါ။
Transaction Report ထွက်လာပါက ပုံစံ-၁(က) Form A-1 တင်လို့ ပြီးပါပြီ။
11) အများနှင့်မသက်ဆိုင်သော (Private) ကုမ္ပဏီအတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form-AR) ကို ဘယ်လိုတင်ရပါသလဲ။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) ပုံစံရယူခြင်း
အများနှင့်မသက်ဆိုင်သော (Private) ကုမ္ပဏီအတွက် www.myco.dica.gov.mm တွင် မိမိကုမ္ပဏီ Account ဖြင့် Login ဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလစာမျက်နှာ (HOME PAGE) အောက်ရှိ အခြားကိစ္စများတင်ပြခြင်း (LODGE OTHER FILINGS) ကို click နှိပ်၍ Registration Number တွင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေခြင်း သင်္ကေတကို click နှိပ်ပြီး မိမိ၏ ကုမ္ပဏီအမည်ကျလာလျှင် Select ကို နှိပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ထို့နောက် ပုံစံအမျိုးအစား (Form Category) တွင် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ကို ရွေးပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်မည့် (Forms Available to File) ပုံစံများတွင်လည်း နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ကို ရွေးချယ်ပြီး တင်သွင်း သည် (SUBMIT) ကို click နှိပ်ရပါမည်။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form-AR) ပုံစံဖြည့်သွင်းခြင်း
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) ပုံစံတွင်ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်သော General, Officers, Registered Office in Union, Principal Place Of Business in Union, Register And Index, Shares, Members, Mortgage and Charge တစ်ခုချင်းစီကို Yes နှိပ်ရပါမည်။
Company ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ အမှတ်စဉ် - ၁၀ နှင့် အမှတ်စဉ် - ၁၁ ကို Yes (သို့မဟုတ်) No ကို click နှိပ်ရပါမည်။
Investment အကြောင်းအရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်းရှိမှသာ ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Activities အကြောင်းအရာတွင် ကုမ္ပဏီမှလုပ်ကိုင်သည့်လုပ်ငန်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူသည့် Activities အား ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Signed by authorised person တွင် ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦး၏ အမည်ကိုဖြည့်ပြီး မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (SAVE DRAFT) ကို နှိပ်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Payment ကို နှိပ်၍ Pay Amount နေရာတွင် ၅၀,၀၀၀ ရိုက်ပြီး မိမိပေးချေမည့် ကတ်အမျိုး အစားကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ Pay by MPU ကို ရွေးပါက E-commerce ဖွင့်ထားရပါမည်။ pay by credit card ကို ရွေးပါက visa card (or) master card ကို ရွေးရပါမည်။
မိမိကတ်မှ ငွေသွင်းမှုပြီးစီးသွားပါက မူလစာမျက်နှာ (HOME) အောက်ရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲ တင်ပြမှုများ (ACTIVE FILINGS) ကို click နှိပ်ပြီး (Draft File) နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ပေါ်ပါက အပြာရောင် (လက်ညှိုးသင်္ကေတ) ကိုclick နှိပ်ရပါမည်။
ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ပေါ်ပါက လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြန်စစ်ဆေး၍ ပြီး၏ (COMPLETE) ကို နှိပ်ရပါမည်။ Transtration Report ပေါ်လာလျှင် Auto Approve Step ဖြစ်သဖြင့် Annual Retrun နောက်ဆုံးတင်ပြရမည့်ရက် (Annual Return Due Date) မှာ နောက်တင်ပြရမည့်နှစ်သို့ ပြောင်းသွားပါမည်။ သို့မှသာ နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ဆောင်ရွက်ချက်ပြီးမည်ဖြစ်ပါသည်။
12) အများနှင့်သက်ဆိုင်သော (Public) ကုမ္ပဏီအတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ကို ဘယ်လိုတင်ရပါသလဲ ။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော (Public) ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက် ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form-AR) နှင့် ပုံစံ - ဆ-၅ (Form - G-5) တင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ (Annual Return) ပုံစံအား Private Company နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) ယူသည့်အတိုင်း ရယူနိုင်ပါသည်။
အများနှင့်သက်ဆိုင်သော (Public) ကုမ္ပဏီအတွက် နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form-AR) ပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်း
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) ပုံစံတွင်ပါရှိသည့် အကြောင်းအရာများဖြစ်သော General, Officers, Registered Office in Union, Principal Place Of Business in Union, Register And Index, Shares, Mortgage and Charge တစ်ခုချင်းစီကို Yes နှိပ်ရပါမည်။
Company ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ အမှတ်စဉ် - ၁၀ မှာ Yes (သို့မဟုတ်) No ကို နှိပ်ရပါမည်။
Members ခေါင်းစဉ်ကိုနှိပ်ပြီး အမှတ်စဉ် - ၈ ကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပြုလုပ်ခဲ့သော နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး ကျင်းပသည့်နေ့ရက် (Date of the last annual general) တွင် ကုမ္ပဏီမှ နှစ်ပတ်လည် အထွေထွေအစည်းအဝေး (AGM) နောက်ဆုံး ကျင်းပခဲ့သည့်ရက်ကို ထည့်ပေးရပါမည်။
Members ခေါင်းစဉ်၏ အမှတ်စဉ် - ၈ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် ကုမ္ပဏီတွင်ပါ၀င်သူများ၏ စာရင်းသည် မှန်ကန်တိကျပါသည် (List of members) မှာ ကုမ္ပဏီ၏ အစုရှယ်ယာရှင် အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ ကျား / မ၊ မွေးနေ့၊ လိပ်စာ၊ စုစုပေါင်းအစုရှယ်ယာ၊ ပေးချေပြီး အစုရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးနှင့် မပေးချေရသေးသော အစုရှယ်ယာများ၏ တန်ဖိုးတို့ကို ဇယားဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပြီး Upload File တွဲပေးရပါမည်။
Investment အကြောင်းအရာတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိန့်နှင့် အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထား ခြင်းရှိမှသာ ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Activities အကြောင်းအရာတွင် ကုမ္ပဏီမှလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူသည့် Activities အား ရွေးချယ်ရပါမည်။
Signed by authorised person တွင် ဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦး၏ အမည်ကို ဖြည့်ပြီး မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (SAVE DRAFT) ကို နှိပ်ပေးရပါမည်။
Payment ကိုနှိပ်၍ Pay Amount နေရာတွင် ၅၀,၀၀၀ ရိုက်ပြီး မိမိပေးချေမည့် ကတ်အမျိုး အစားကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ Pay by MPU ကိုရွေးပါက E-commerce ဖွင့်ထားရပါမည်။ pay by credit card ကို ရွေးပါက visa card (or) master card ကို ရွေးရပါမည်။
မိမိကတ်မှ ငွေသွင်းမှုပြီးစီးသွားပါက မူလစာမျက်နှာ (HOME) အောက်ရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲ တင်ပြမှုများ (ACTIVE FILINGS) ကို နှိပ်ပြီး (Draft File) ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) ပေါ်ပါက အပြာရောင် (လက်ညှိုးသင်္ကေတ) ကို နှိပ်ရပါမည်။
ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) ပေါ်ပါက လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြန်စစ်ဆေး၍ ပြီး၏ (COMPLETE) ကို နှိပ်ရပါမည်။ Transtration Report ပေါ်လာလျှင် ပုံစံ -နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) ဆောင်ရွက်ချက်ပြီးပါမည်။
ပုံစံ - ဆ-၅ (Form - G-5) တွင် ကုမ္ပဏီမှရေးဆွဲထားသည့် အနီးကပ်ဆုံး ဘဏ္ဍာနှစ်၏ Financial Statement တွင် Balance Sheet, Profit or Loss and Cash Flow တို့ ပါဝင်ပြီး Upload File တွဲပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့ဆောင်ရွက်သည့် ပုံစံများတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြန်စစ်ဆေး၍ ပုံစံ - ဆ-၅ (Form-G-5) ပေါ်တွင် ပြီး၏ (COMPLETE) ကို နှိပ်လျှင် Transtration Report ပေါ်မှသာ လုပ်ဆောင်ချက် ပြီးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းရန်မလိုပါ။
13) ကုမ္ပဏီ၏အခြေအနေ မှာ ဆိုင်းငံ့ (Suspended) ဖြစ်ပေါ်လျှင် မည်သို့ဆောင်ရွက် ရပါသလဲ။
ကုမ္ပဏီ၏အခြေအနေမှာ ဆိုင်းငံ့ (Suspended) ဖြစ်နေရင် ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form-AR) နှင့် ပုံစံ - ဈ-၉(ဃ) (Form-I-9(D)) တို့ကို တင်ရပါမည်။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) နောက်ဆုံးတင်ပြရမည့်ရက်ကို ကုမ္ပဏီ၏ Profile တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အဆိုပါရက်နေ့အထိ မှတ်ပုံတင်ကြေး ၅၀,၀၀၀/- ကျပ် ပေးသွင်းတင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) နောက်ဆုံးတင်ပြရမည့်ရက်မှ ကျော်လွန်ပြီး ၂၇ ရက်အတွင်းဖြစ်ပါက နောက်ကျကြေး (late fee) ၁၀၀,၀၀၀/- ကျပ် အပါအဝင် ၁၅၀,၀၀၀/- ကျပ် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Annual Return) တင်ပြရမည့်ရက်ထက် ၂၈ ရက် ကျော်လွန်သည်နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ Profile တွင် ဆိုင်းငံ့ (Suspended) အခြေအနေကို ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်းငံ့ (Suspended) စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် ပုံစံ - ဈ-၉(ဃ) (Form-I-9(D)) တွင် Company Letter Head ဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သို့ လိပ်မူ၍ ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR) လုပ်ဆောင်ပြီးကြောင်း (သို့မဟုတ်) COMPANY PROFILE ကို Screen Shot ရိုက်ပြီး Upload File တွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆိုင်းငံ့စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ရန် မှတ်ပုံတင်ကြေး ၁၀၀,၀၀၀/- ကျပ် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ပုံစံ - နှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာ (Form - AR)အတွက် ၅၀,၀၀၀/-ကျပ် + နောက်ကျကြေး (Late Fee) အတွက် ၁၀၀,၀၀၀/-ကျပ်နှင့် + ဆိုင်းငံ့စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းအတွက် ၁၀၀,၀၀၀/-ကျပ် အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၂၅၀,၀၀၀/-ကျပ် ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ငွေပေးသွင်းရာ တွင် မူလစာမျက်နှာ (HOME) အောက်ရှိ ငွေဖြည့်ရန် (Fund Account) ၌ ၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ်ကို ပေါင်းသွင်းပါက ပိုမိုလွယ်ကူမည်ဖြစ်ပါသည်။
14) အစုရှယ်ယာလျှော့ချချင်လျှင် မည်သည့် ပုံစံအမျိုးအစားမျိုးကို တင်ရပါသလဲ။
အစုရှယ်ယာလျှော့ချချင်လျှင် ပုံစံ ဂ - ၆ (က)(Form-C-6A)၊ ပုံစံ ဂ - ၆ (ခ)(Form-C-6B) နှင့် ပုံစံ ဂ - (၃)(Form-C-3) တို့ကို တင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂ - ၆ (က) (Form – C-6A) ပုံစံရယူခြင်း
ပထမအဆင့်အနေဖြင့် www.myco.dica.gov.mm တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ID နှင့် Password များကိုရိုက်၍ Login ဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလစာမျက်နှာအောက်ရှိ အခြားကိစ္စများတင်ပြခြင်း (Lodge Other Filings) နှိပ်၍ ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်အမှတ်ရိုက်ထည့်ပြီး ရှာဖွေခြင်း သင်္ကေတ (Search) ကိုနှိပ်ပြီး မိမိ၏ကုမ္ပဏီ အမည်ကျလာလျှင် Select ကိုနှိပ်ရပါမည်။
ထို့နောက် ပုံစံအမျိုးအစားတွင် ပုံစံ(ဂ) ကိုရွေးပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်မည့်ပုံစံများ တွင် ပုံစံ ဂ -၆(က) (Form-C-6A) ကို ရွေးချယ်ပြီး တင်သွင်းသည် (Submit) ကိုနှိပ်ရပါမည်။
ဂ - ၆ (က) (Form – C-6A) ပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်း
ဂ - ၆ (က) (Form-C-6A) ပုံစံတွင်ပါရှိသော အမှတ်စဉ် - ၂ တွင် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များသို့ လိပ်မူ၍ ရှယ်ယာလျှော့ချမည့် အကြောင်းကြားစာ တွဲပေးရပါမည်။
အမှတ်စဉ် - ၃ တွင် ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ရှယ်ယာရှင်များကိုလိပ်မူ၍ ရှယ်ယာ လျှော့ချရခြင်း အကြောင်းပြချက် တွဲပေးရပါမည်။
ပုံစံ ဂ - ၆(က) (Form-C-6A) သည် အစုရှယ်ယာလျှော့ချမည့်ကိစ္စ မဆောင်ရွက်ခင် အသိပေးတင်ပြသည့် အခြေအနေဖြစ်သည့်အတွက် ရက်စွဲများထည့်ရန် မလိုပါ။ မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်းရန်လည်းမလိုပါ။
မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား အဆင့်တစ်ခုစီပြီးတိုင်း မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (Save Draft) ကိုနှိပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြီးစီးသွားသည့်အခါတွင် ပြီး၏ (Complete) ကိုနှိပ်ရပါမည်။ Transaction Report ကျလာလျှင် ဆောင်ရွက်ချက် ပြီးပါမည်။
ပုံစံ ဂ - ၆(က) (Form-C-6A) တင်ပြပြီးပါက ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အစုရှယ်ယာလျှော့ချမည့် အကြောင်းကြား စာကို နိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်း ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးလျှက်ရှိသော နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာ တစ်စောင်တွင် ပထမအကြိမ် ထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။
ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီမှတင်ပြသော ပုံစံ ဂ - ၆(က) (Form-C-6A) အား မှတ်ပုံတင်အရာရှိမှ အတည်ပြုပြီးမှ အစုရှယ်ယာလျှော့ချသည့် အစုရှယ်ယာရှင် အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပရပါမည်။ အစည်းအဝေးမှ အစုရှယ်ယာလျှော့ချသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အား နိုင်ငံတော်တစ်ဝှမ်း ထုတ်ဝေဖြန့်ဖြူးလျှက်ရှိသော နေ့စဉ်ထုတ် သတင်းစာတစ်စောင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထည့်သွင်းဖော်ပြရပါမည်။
ထို့နောက် ပုံစံ ဂ - ၆(ခ) (Form-C-6B) ကိုတင်ရပါမည်။
ဂ - ၆ (ခ) (Form – C-6B) ပုံစံရယူခြင်း
ပုံစံ ဂ - ၆(ခ) (Form-C-6B) အား ပုံစံ ဂ - ၆(က) (Form-C-6A) ကို ယူသည့်အတိုင်း ယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂ - ၆ (ခ) (Form – C-6B) ပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်း
ပုံစံ ဂ - ၆(ခ) (Form-C-6B)တွင်ပါရှိသော အမှတ်စဉ် - ၂ တွင် Company Letter Head ဖြင့် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အထူးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို Upload File တွဲပေး ရပါမည်။
အမှတ်စဉ် - ၃ တွင် မိမိတို့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းစာအမည်နှင့် သတင်းစာတွင် ဖော်ပြသည့်ရက်စွဲအား ထည့်သွင်းရပါမည်။ အစုရှယ်ယာရှင် အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး ၂၁ ရက်အတွင်း ပုံစံ ဂ-၆(ခ) (Form-C-6B) ကိုတင်လျှင် မှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးသွင်း ရန်မလိုပါ။ ၂၁ ရက်ကျော်လွန်ပြီးတင်လျှင် နောက်ကျကြေး (late fee) ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား အဆင့်တစ်ခုပြီးတိုင်း မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (Save Draft) ကို နှိပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြီးစီးသွားသည့်အခါတွင် ပြီး၏(Complete) ကို နှိပ်ရပါမည်။ Transaction Report ကျလာလျှင် ဆောင်ရွက်ချက်ပြီးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂ - ၃ (Form – C- 3) ပုံစံရယူခြင်း
ပုံစံ ဂ-၃ (Form-C-3) အား ပုံစံ ဂ - ၆(က) (Form-C-6A) နှင့် ပုံစံ ဂ - ၆(ခ) (Form-C-6B) ကို ယူသည့်အတိုင်း ပုံစံအမျိုးအစားတွင် ပုံစံ(ဂ) ကိုရွေးပြီး ဖြည့်သွင်းနိုင်မည့်ပုံစံများတွင် ပုံစံ ဂ-၃ ကို ရွေးချယ်ပြီး တင်သွင်းသည်ကို နှိပ်ရပါမည်။
ဂ - ၃ (Form – C- 3) ပုံစံ ဖြည့်သွင်းခြင်း
ပုံစံ ဂ-၃ (Form-C-3) တွင်ပါရှိသော Share နေရာကိုနှိပ်ပြီး အမှတ်စဉ်- ၂ တွင် ကုမ္ပဏီ၏ မတည် ငွေရင်း ပြောင်းလဲမှုရှိပါသလား မေးခွန်းရှိ Yes (သို့မဟုတ်) No တွင် Yes ကို ရွေးချယ်ရ ပါမည်။
အမှတ်စဉ်-၂ (က) ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်ပေးသည့် အစုရှယ်ယာအမျိုးအစားအားလုံး၏ စုစုပေါင်း အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်နေရာတွင် လျှော့ချသည့်အစုရှယ်ယာ အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရပါမည်။
အမှတ်စဉ်-၂(ဂ) ကုမ္ပဏီ၏ မူရင်းအစုများ ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတွင် ပြောင်းလဲမှု ရှိပါသလား မေးခွန်းတွင် ယခင်ကမူရင်းအစုများပိုင်ဆိုင်သည့် ကုမ္ပဏီရှိလျှင် ပြောင်းလဲမှု ရှိပါက Yes ကို ရွေးပြီး မရှိလျှင် No ကိုရွေးပေးရပါမည်။
အမှတ်စဉ်-၂ (င)အစုရှယ်ယာအရေအတွက်တိုးခြင်း နှင့် (စ)အစုရှယ်ယာများပယ် ဖျက်ခြင်း Change ကိုနှိပ်ရပါမည်။ ပြင်ဆင်ခြင်းအကြောင်းအရာတွင် Cancellation ကို နှိပ်ရပါမည်။ မိမိ လျှော့ချသည့် အစုရှယ်ယာအရေအတွက်၊ ‌ပေးချေပြီး အစု ရှယ်ယာတန်ဖိုးများအား အနှုတ် လက္ခဏာများဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးပြီး တိုးပွားခြင်း အကြောင်းရင်း တွင် Capital Reduction ကို ရွေးပြီး ပြောင်းလဲပြင်ဆင်သည့် ရက်စွဲ တွင် မိမိတို့ အစည်း အဝေးကျင်းပသည့်ရက်ကို ထည့်ပေးရပါမည်။
Member နေရာကိုနှိပ်ပြီး ပြောင်းလဲပြီးသည့်အခါ ကုမ္ပဏီတွင် ပါ၀င်သူများ၏ မှတ်ပုံတင် စာရင်းပြောင်းလဲပါသလား မေးခွန်းတွင် Yes ကိုနှိပ်၍ အစုရှယ်ယာလျှော့ချသည့် အစုရှယ်ယာရှင် များ၏ အမည်များဘေးတွင် ခဲတံပုံသင်္ကေတကို နှိပ်ရပါမည်။ အဆိုပါ လူပုဂ္ဂိုလ်သည် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ရပ်စဲပါသလား ဆိုသည့်မေးခွန်းတွင် No နှိပ်ပြီး ယခင်ဖြည့်စွက်ထားသည့် Share များကိုဖျက်ပြီး လျှော့ချသည့် တန်ဖိုးများအားပြောင်း လဲ ဖြည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Signature ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ အမည်ကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေး ရပါမည်။
Payment ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် မိမိပေးသွင်းရမည့် Payment Amount (10000/-)ကို ရိုက်ထည့်ပြီး မိမိပေးသွင်းမည့် ကတ်အမျိုးအစားအား ရွေးချယ်ပေးရ ပါမည်။ MPU ဖြင့် ပေးသွင်းလျှင် E-Commerce ဖွင့်ထားသည့်ကတ်ဖြစ်ရပါမည်။ Credit Card (Visa/ Master) ဖြင့်လည်းပေးသွင်းလို့ ရပါသည်။ပုံစံ ဂ-၃ ကို အစုရှယ်ယာရှင် အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပပြီး ၂၁ ရက်အတွင်း တင်ရပါမည်။ ၂၁ ရက်ကျော်မှတင်လျှင် နောက်ကျကြေး (late fee) ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအား အဆင့်တစ်ခုပြီးတိုင်း မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် ကိုနှိပ်ပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြီးစီးသွားသည့်အခါတွင် ပြီး၏ (Complete) ကို နှိပ်ရ ပါမည်။ Transaction Report ကျလာလျှင် ဆောင်ရွက်ချက်ပြီးမည်ဖြစ်ပါသည်။
15) အစုရှယ်ယာမတည်ငွေရင်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီတွင် ပါဝင်သူများ၏ မှတ်ပုံတင်စာရင်းများ အား ပြင်ဆင်လိုလျှင် C-3 Form နှင့် ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလဲ။
C-3 Form ရယူခြင်း
C-3 Form ကို www.myco.dica.gov.mm တွင် မိမိကုမ္ပဏီ Account ဖြင့် Log in ဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် Home (မူလစာမျက်နှာ) မှ Company I Manage (ကုမ္ပဏီများထိန်း သိမ်းခြင်း) မှတစ်ဆင့် Registration No နှိပ်ပါ။ New Filing (အသစ် တင်ပြခြင်း) မှ Form Category တွင် (C) ရွေးပြီး Forms Available to File တွင် (C-3) ရွေး၍ Submit နှိပ်ရပါမည်။
C-3 Form ဖြည့်သွင်းခြင်း
C-3 Form သို့ရောက်ပါက Share စာမျက်နှာတွင် Is thereachange in the company’s share capital? တွင် (Yes) ရွေးပါ။ Is thereachange in the company’s ultimate holding company? တွင် ပြောင်းလဲချင်ပါက (Yes) ပြောင်းလဲမှုမရှိပါက (No) နှိပ်ပေးရပါမည်။
Change Shareမှာ Increase ကိုနှိပ်ပါ။ Share Class Code ရွေးပါ။ Totalမှာ တိုးချင်တဲ့ Share Amount ရိုက်ထည့်ပါ။ Amount Paid / Unpaid တို့တွင်လည်း ထပ်တိုးရှယ်ယာများ သာ ထည့်ပါ။ Reason ရွေးပါ။ Effective date of change တွင် Date ထည့်ပြီး Ok နှိပ်ပေး ရပါမည်။ စာမျက်နှာ တစ်မျက်နှာ ဖြည့်ပြီးတိုင်းတွင် Save Draft နှိပ်ပေးရပါမည်။
Foreign Company (သို့မဟုတ်) Myanmar Company သို့ပြောင်းလဲခြင်း
Company စာမျက်နှာတွင် Following the change the company will beaforeign company? တွင်အပြောင်းအလဲရှိပါက Yes (သို့မဟုတ်) No ရွေးပေးရပါမည်။ အပြောင်း အလဲ မရှိပါက နောက်စာမျက်နှာသို့ကျော်၍ ရွေးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Member စာမျက်နှာတွင် Following the company there will beachange in the register of members? တွင် (Yes) ရွေးပါ။ ထို့နောက် (+Add) နှိပ်ပြီး ကိုယ်ရေး အချက် အလက်များ၊ ရှယ်ယာများကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် Ok နှိပ်ပေးရပါမည်။
နှုတ်ထွက်ချင်တဲ့ရှယ်ယာရှင်နာမည်ဘေးမှ ခဲတံပုံစံကိုနှိပ်ပါ။ Is this person ceasing to beamember? တွင် (Yes)ရွေးပြီး Date ထည့် Ok နှိပ်ပေးရပါမည်။
ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းမည့် ရှယ်ယာရှင်နာမည်ဘေးရှိ ခဲတံပုံစံ နှိပ်ပြီး Is this person ceasing to beamember? တွင် (No) ရွေးပါ။ ယခင်ဖြည့်ထားပြီးသား ရှယ်ယာများကို Delete နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် နောက်ဆုံး Update ရှယ်ယာ ထည့်ပါ။ ရှယ်ယာ လွှဲပြောင်းခြင်းခံရသူက ရှိပြီးသား ရှယ်ယာရှင်ဆိုရင် အထက်ပါ နည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။ အသစ်ဆိုရင်(+Add) နှိပ်ပြီး အချက်အလက်များ၊ ရှယ်ယာများ ဖြည့်ပေးရပါမည်။
ထို့နောက် Signature တွင် Director (သို့မဟုတ်) Secretary ရွေး၍ နာမည်ဖြည့် ပေးရပါ မည်။
Payment ကိုနှိပ်၍ Payment Amount နေရာတွင် (10000) ရိုက်ထည့်ပြီး မိမိပေးချေမည့် ကဒ်အမျိုးအစားကို ရွေးခြယ်ပေးရပါမည်။ Pay by MPU ကိုရွေးပါက E-Commerce ဖွင့် ထားမှသာ ဖြည့်သွင်းလို့ရမည်ဖြစ်သည်။ Pay by Credit Card ကိုရွေးပါက Visa Card (သို့မဟုတ်) Master Card ကိုရွေးပေးရပါမည်။ ထို့နောက် Card No, OTP ရိုက် ထည့်ပြီး Confirm Payment နှိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေသွင်းမှုပြီးစီးပါက Successful ဖြစ်ပြီး Log Out ဖြစ်သွားပါသဖြင့် Log In ပြန်ဝင်ပြီး Home (မူလစာမျက်နှာ) ထဲမှ Active Filing (ဆောင်ရွက်ဆဲတင်ပြမှုများ) သို့ဝင်၍ (အပြာရောင် လက်ပုံစံ) အားနှိပ်ပေးပါ။ ထို့နောက် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ Complete ကိုနှိပ် ရပါမည်။ ထို့နောက် Transaction Report ထွက်လျှင် C-3 Form တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှု ပြီးမြောက် ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
16) ဒါရိုက်တာနှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့၏ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း D1 Form အား ဘယ်လိုတင်ရပါသလဲ။
D-1 Form ရယူခြင်း
D-1 Form အတွက် www.myco.dica.gov.mm တွင် မိမိကုမ္ပဏီ Account ဖြင့် Log In ဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလစာမျက်နှာ Home Page (မူလစာမျက်နှာ) အောက်ရှိ Companies I Manage (ကုမ္ပဏီများထိန်းသိမ်းခြင်း) မှ တစ်ဆင့် Registration No. ကို နှိပ်ပါ။ New Filings (အသစ်တင်ပြခြင်း) မှ Form Category တွင် (D) ရွေး၍ Forms Available to File မှ (D1) ကို ရွေးချယ်ပြီး (SUBMIT) ကိုနှိပ်ရပါမည်။
D-1 Form ဖြည့်သွင်းခြင်း
Director စာမျက်နှာအောက်တွင် +ADD ကိုနှိပ်၍ Director (သို့မဟုတ်) အလှည့်ကျ Director ကိုရွေးချယ်ပြီး Date of Appointment တွင် ဒါရိုက်တာအသစ်အား ခန့်အပ်သောနေ့ရက်ကို ဖြည့်ပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ပေးပါ။ OK စာသားပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ယောက်ခန့်အပ်လိုလျှင်လည်း ထိုနည်းတူပင် ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာအား နှုတ်ထွက်လိုလျှင် နှုတ်ထွက်လိုသော ဒါရိုက်တာဘေးရှိ (ခဲတံပုံ) အား နှိပ်၍ Is this person ceasing to be? မှာ Yes ကိုနှိပ်ပြီး Date Person Ceased to be တွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ် နှုတ်ထွက်သည့် နေ့ရက်အား ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ OKစာသား ပေါ်လာ ပါလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ယောက်နှုတ်ထွက်လိုလျှင်လည်း ထိုနည်းတူပင်ဖြစ်သည်။
ဒါရိုက်တာ နှင့် အတွင်းရေးမှူး ၏ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်ခြင်း
ဒါရိုက်တာ နှင့် အတွင်းရေးမှူး ၏ အချက်အလက်များ ပြင်ဆင်လိုပါက နှုတ်ထွက်စေလို သော ဒါရိုက်တာ နှင့် အတွင်းရေးမှူး ဘေးရှိ (ခဲတံပုံ) အား နှိပ်၍ Is this person ceasing to be? မှာ No ကိုနှိပ်ပြီး ပြင်ဆင်လိုသောအချက်အလက်များအား ပြင်နိုင်ပါသည်။ (မှတ်ချက် - D1 တွင် အမည် နှင့် မွေးသက္ကရာဇ်မှ လွဲ၍ နှုတ်မထွက်ဘဲ ပြင်လို့ ရပါသည်။)
Upload PDFနေရာတွင် နောက်ဆုံး Update ကျန်ရှိမည့် Directors များ၏ မှတ်ပုံတင်
မိတ္တူ (သို့မဟုတ်) ပတ်စ်ပို့စ်မိတ္တူများကို PDF ပြောင်း၍ Upload File တွင်ထည့်ပေးပါ။
တစ်မျက်နှာပြီးတိုင်း မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (Save Draft) ကို နှိပ်ပေးပါ။
Secretary စာမျက်နှာအောက်တွင် +ADD ကိုနှိပ်၍ Date of Appointment တွင် အတွင်းရေးမှူး အားခန့်အပ်သော နေ့ရက်ကို ဖြည့်ပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်ပေးပါ။ OK စာသားပေါ်လာပါလိမ့်မည်။ သို့သော် သတိပြုရမည်မှာ ခန့်အပ်သော အတွင်းရေးမှူး‌၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူအား ရှေ့ Directors မျက်နှာ အောက်ရှိ Upload PDF နေရာတွင် လက်ရှိ ဒါရိုက်တာများနှင့်အတူ PDF ပြောင်း၍ File တစ်ခု တည်းပေါင်းထည့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ခန့်အပ်ထားပြီးသား Secretary ကို နှုတ်ထွက်လိုလျှင် နှုတ်ထွက်လိုသော Secretary‌ ဘေးရှိ (ခဲတံပုံ) အားနှိပ်၍ Is this person ceasing to be? မှာ Yes ကိုနှိပ်ပြီး Date Person Ceased to be တွင် ထိုပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ထွက်သည့် နေ့ရက်အား ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ တစ်မျက်နှာပြီးတိုင်း မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (Save Draft) ကို နှိပ်ပေးပါ။
Full name in English နေရာတွင် ကုမ္ပဏီရှိလက်ရှိဒါရိုက်တာ (သို့မဟုတ်) အတွင်း ရေးမှူးဖြစ်သူ ၏ နာမည်ကိုဖြည့်ပြီး မူကြမ်းသိမ်းဆည်းသည် (Save Draft) ကို နှိပ်ပေးပါ။
Payment စာမျက်နှာအောက်ရှိ Payment Amount နေရာတွင် ၁၀,၀၀၀ ရိုက်ပြီး မိမိပေးချေမည့် ကဒ်အမျိုးအစားကို ရွေးချယ်ရပါမည်။ Pay by MPU ကိုရွေးပါက E-Commence ဖွင့်ထားရပါမည်။ Pay by Credit card ကိုရွေးပါက Visa Card (or) Master Card ကိုရွေးရပါမည်။ ထို့နောက် Card No နှင့် OTP ရိုက်ထည့်ပြီး ပေးသွင်းရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
ငွေသွင်းမှုပြီးစီးသွားပါက Log out (သို့မဟုတ်) Session Expired ဖြစ်သွားပါသဖြင့် Log In ပြန်ဝင်‌ပြီး မူလစာမျက်နှာ (HOME) အောက်ရှိ ဆောင်ရွက်ဆဲတင်ပြမှုများ (Active Filings) သို့ဝင်၍ (အပြာရောင်လက်ပုံစံ) အားနှိပ်ပေးပြီး လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြန် လည်စစ်ဆေး၍ COMPLETE ကိုနှိပ်ရပါမည်။ ထို့နောက် Transaction Report ထွက် လျှင် D-1 Form တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုပြီးမြောက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
17) Myanmar Companies Online (MyCO) တွင် Form Fees တွေအတွက် ဘယ်လိုငွေပေးချေ ရပါသလဲ။
Form Fees တွေအတွက် ငွေပေးချေရန် www.myco.dica.gov.mm တွင် မိမိကုမ္ပဏီ Account ဖြင့် Login ဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလစာမျက်နှာ (HOME PAGE) အောက်ရှိ ငွေဖြည့်ပါ (FUND ACCOUNT) ကို နှိပ်၍ ပေးချေလိုသော ငွေပမာဏ (AMOUNT) နှင့် ပေးချေမည့် ကတ်အမျိုးအစား (TYPE) တွင် (အကြွေးကတ် (Credit Card) သို့မဟုတ် MPU ကတ်) ကို ရွေးချယ်ကာ တင်သွင်းသည် (SUBMIT) ကို နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
တင်သွင်းသည် (SUBMIT) ကို နှိပ်သည့်အခါ “Are you sure you want to submit this payment …” မေးလာလျှင် Yes ကို ထပ်နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
MPU ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း
ကတ်အမျိုးအစား (TYPE) တွင် MPU ကို ရွေးချယ်လျှင် Card Number ၊ Expire Date နှင့် OTP Code တို့ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Card Number နေရာတွင် ဘဏ်ကတ်၏ ရှေ့ဖက်ရှိ ဂဏန်း (၁၆) လုံးပါသော နံပါတ် တို့ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Expire Date နေရာတွင် ဘဏ်ကတ်၏ ရှေ့ဖက်ရှိ VALID THRU ၏ ဘေးနားတွင် ရှိသော Month နှင့် Year တို့ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Card Number နှင့် Expire Date တို့ကို ဖြည့်ပြီးသည့်အခါ GET OTP ကို နှိပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
GET OTP ကို နှိပ်သည့်အခါ ဘဏ်ကတ်အား E-commerce လျှောက်သည့်အချိန်က ဖြည့်သွင်းခဲ့သော Mail Address သို့ OTP Code ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် OTP နေရာတွင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်မှ ကတ်ပိုင်ရှင် (Card Holder) ရဲ့ Mail Address သို့ ပေးပို့သော OTP Code ကို ဖြည့်သွင်း၍ CONFIRM PAYMENT ကိုနှိပ်ပြီး ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
Credit ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေခြင်း
ကတ်အမျိုးအစား (TYPE) တွင် အကြွေးကတ် (Credit Card) ကို ရွေးချယ်လျှင် VISA သို့မဟုတ် MASTER ကို ထပ်မံရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Credit ကတ်တွင် VISA ဖြစ်စေ MASTER ဖြစ်စေ နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် Card Number ၊ Expiry Date နှင့် Security Code တို့ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Card Number နေရာတွင် ဘဏ်ကတ်၏ ရှေ့ဖက်ရှိ ဂဏန်း (၁၆) လုံးပါသော နံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Expiry Date နေရာတွင် ဘဏ်ကတ်၏ ရှေ့ဖက်ရှိ VALID THRU ၏ ဘေးနားတွင် ရှိသော Month နှင့် Year တို့ကို ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
Card Number နှင့် Expiry Date တို့ကို ဖြည့်ပြီးသည့်အခါ Security Code နေရာတွင် ဘဏ်ကတ်၏ ကျောဖက်ရှိ နောက်ဆုံးဂဏန်း (၃) လုံးကို ဖြည့်သွင်း၍ Pay ကိုနှိပ်ပြီး ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။MPU ကတ်ဖြင့် ငွေပေးချေမည် ဆိုပါက အသုံးပြုမည့် MPU ကတ်သည် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွင် E-commerce လျှောက်ထားပြီးသည့် ကတ်အမျိုးအစား ဖြစ်ရ ပါမည်။ အကြွေးကတ် (Credit (VISA သို့မဟုတ် MASTER) ကတ်) ဖြင့် ငွေပေးချေလျှင် E-commerce လျှောက်ထားစရာမလိုပါ။
18) Myanmar Companies Online (MyCO) တွင် ငွေပေးချေသည့် Transaction အောင် / မအောင် ဘယ်လို စစ်ဆေးရပါသလဲ။
Myanmar Companies Online (MyCO) တွင် ငွေပေးချေသည့် Transaction အောင် / မအောင် စစ်ဆေးနိုင်ရန် www.myco.dica.gov.mm တွင် မိမိကုမ္ပဏီ Account ဖြင့် Login ဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
မူလစာမျက်နှာ (HOME PAGE) အောက်ရှိ MyCO အသုံးပြုမည့်သူ စာရင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား နောက်ဆုံးအခြေအနေကြည့်ရှုခြင်း (UPDATE OR VIEW CLIENT ACCOUNT INFORMATION) ကို နှိပ်၍ Financial ကို ထပ်မံနှိပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေသည့် Transaction အောင်ခဲ့လျှင် ဘယ်နေ့၊ ဘယ်ရက်တွင် ဘယ်ကတ် အမျိုးအစားဖြင့် ငွေဘယ်လောက် ပေးချေခဲ့သည်ကို တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ငွေပေးချေသည့် Transaction မအောင်ခဲ့လျှင် Financial တွင် ပေးချေသည့်ရက်နှင့် ပတ်သက်သည့် Transaction အား တွေ့ရမည်မဟုတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။Transaction မအောင်ခဲ့လျှင် ပထမဦးစွာ အသုံးပြုသည့်ကတ်တွင် ဘဏ်မှ ငွေဖြတ် / မဖြတ် အရင် စစ်ဆေးပါ။ ငွေမဖြတ်ခဲ့လျှင် ထပ်မံကြိုးစားကြည့်ပါ။ အကယ်၍ အသုံးပြုသည့်ကတ်မှ ငွေဖြတ်သွားပြီး MyCO ၏ Financial တွင် Transaction မအောင်လျှင် သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွင် Complaint Form တင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
1) ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရာတွင် အနည်းဆုံး လိုအပ်သည့် ရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင်မှုရာခိုင်နှုန်း အချိုးသတ်မှတ်ချက် ကိုသိရှိလိုပါသည်?
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဥပဒေ ၂၂ နှင့် ကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ (ဂ) အရ နိုင်ငံခြားသား ၈၀%နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀% ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
2) နိုင်ငံခြားဆေးဝါး/ တိုင်းရင်းဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထား ရာတွင် မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပါသနည်း?
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုချက်
မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ-၇(က) ဖြင့်
FDA ၏ ထောက်ခံချက်
ပြည်ပမှ တင်သွင်းမည့်စက်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် ပြည်တွင်းမှဝယ်ယူမည့် စက်ပစ္စည်းစာရင်းများ
3) မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း အတွက် ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်ရယူရန် မည့်သည့်စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း စာချုပ် များ၊ Inspection Certificate၊ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှု ရာခိုင်နှုန်း၊ နည်းပညာ အသုံးပြုမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်နှင့် အသုံးပြုခွင့်ရရှိကြောင်း အထောက်အထားများ တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
4) မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကော်မရှင်မှ မည်သည့်စနစ်ဖြင့်လက်ခံဆောင်ရွက်ပါသလဲ?
ကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် -၈၅/၂၀၁၇အရ SKD စနစ်သစ်ဖြင့်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
5) ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူတစ်ဦးက မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါ ကင်းလွတ်ခွင့်များ နှင့်သက်သာခွင့်များမှာ အဘယ်နည်း?
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သော ကဏ္ဍများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ အချိုးကျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်း အပေါ်မူတည်၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်များကို ခွင့်ပြု ပေးနိုင်သည်။ ယင်းတို့ကို ဝင်ငွေခွန်၊ အကောက်ခွန်နှင့် ပြည်တွင်း အခွန်အခများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်များနှင့် သက်သာခွင့် ပုံစံများအပြင် ဝင်ငွေခွန် အကဲဖြတ်မှု ရည်ရွယ်ချက်အတွက် တန်ဖိုးလျှော့ခွင့်ကို ရယူနိုင်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် သက်ဆိုင်သောကင်းလွတ်ခွင့်များ၊သက်သာခွင့်များနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ၏ ပုဒ်မ ၇၄၊၇၅၊၇၆၊၇၇နှင့်၇၈ တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထား သည်။
6) မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် အဆိုပြုချက်/ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာ လို-မလိုနှင့် ပူးတွဲ တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများအား သိရှိလိုပါတယ်?
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နည်းဥပဒေ ၂၃၈ အရ မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင် အဆိုပြုချက်/ အတည်ပြု လျှောက်ထားလွှာ တင်ပြရန် မလိုပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် ထည့်ဝင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ၊ ရှယ်ယာအချိုးအစား ဖော်ပြချက်၊ စက်ပစ္စည်း စာရင်းများတင်ပြရန်လိုအပ်ပါတယ်။
7) ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် မည်သည့်စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ် ပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ အဆိုပြုချက် ပုံစံ-၂, မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်ထားလွှာ ပုံစံ ၇-က တို့နှင့်အတူ ကုန်ကြမ်းရရှိမှု အခြေအနေနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များအား ပူးတွဲ တင်ပြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
8) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ်ဦးသည် မြေယာအသုံးပြုခွင့်ကို မည်သို့ရရှိမည်နည်း?
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် ထောက်ခံချက် ရရှိထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ တစ်ဦးသည် ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေယာ၊ အဆောက်အဦ အတွက် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ရှင် များထံမှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံပိုင် မြေယာ/ အဆောက်အဦ များအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများထံမှဖြစ်စေ ကာလရှည် မြေငှားရမ်းခြင်းကို ရရှိနိုင် သည်။ ကနဦးငှားရမ်းသည့် ကာလမှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀အထိဖြစ်ပြီး ၁၀နှစ်စီဖြင့် နှစ်ကြိမ်(စုစုပေါင်းနှစ်၂၀) သက်တမ်းတိုးချဲ့ နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေအသုံးပြု ခွင့်ရရှိရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့် လျှောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
9) အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးနောက် မည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း?
အတည်ပြုမိန့် ရရှိပြီးနောက်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏သဘာဝ သို့မဟုတ် အခြား ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပေါ် မူတည်၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၊ အစိုးရ အေဂျင်စီ များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ လိုင်စင်များ သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်များ လိုအပ်နိုင် ပါသည်။ ထို့နောက် အတည်ပြုချက်များ၊လိုင်စင်များ၊ ခွင့်ပြုချက်များ၊ ဖက်စပ် လုပ်ငန်း သဘောတူညီချက်နှင့် မြေငှားသဘောတူညီချက်များအားလုံး၏ မိတ္တူ၅စုံ ကိုကော်မရှင်သို့တင်သွင်းရမည်။
10) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံများကို သိလိုပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် နိုင်ငံခြားသားပိုင်ဆိုင်မှု ၁၀၀% ဖြင့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် လုပ်ငန်း ရှိပါသလား?
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ အရ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းများအနက် ကောက်ပဲသီးနှံများအား ဖော်ထုတ်ပြီးး စိုက်ပျိုးမြေတွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းစျေးကွက်၌ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းမှအပ ကျန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံခြားသားပိုင်ဆိုင်မှု ၁၀၀ % ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
11) စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဖက်စပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောင်ရွက်ရန် နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံ ခြားသားပိုင်ဆိုင်မှုအချိုးသတ်မှတ်ချက်ရှိပါသလား?
ကောက်ပဲသီးနှံများအား ဖော်ထုတ်ပြီး စိုက်ပျိုးမြေတွင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး ပြည်တွင်းဈေးကွက်၌ ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ ပြည်ပသို့တင်ပို့ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသား အနည်းဆုံး ၂၀% အချိုးဖြင့် ပါဝင်ရန် သတ်မှတ်ထားပါသည်။
12) စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ထွက်ရှိလာသည့် ကောက်ပဲသီးနှံများကို ပြည်ပသို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ရောင်းချခွင့် ရှိပါသလား?
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအနေဖြင့် ကောက်ပဲသီးနှံများကို ပြည်ပသို့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ရောင်းချခွင့်ရှိပါသည်။
13) ဆီအုန်း၊ ရာဘာ နှင့် ဂုန်လျှော်ကဲ့သို့ စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံများကို ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီမှ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ကြမ်းအတိုင်း ပြည်ပကို တင်ပို့ခွင့်ရှိပါသလား?
စက်မှုကုန်ကြမ်းသီးနှံများကို ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီမှ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ကြမ်းအတိုင်း ပြည်ပ သို့ တင်ပို့ခွင့်ရှိပါသည်။ အဆိုပြုချက်တွင် ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
14) စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် အခြားအရေးကြီးသည့် အချက်အလက်များကို ရှင်းပြပါ။
စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် မြေ ရရှိနိုင်မှုမှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ရာ မြေနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ရပါမည်-
တောင်သူလယ်သမားများအမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သည့် မြေဖြစ်ပါက ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် တောင်သူလယ်သမားများနှင့် Contract Farming စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်။
မြေလွတ်မြေရိုင်းဖော်ထုတ်ပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါကမြေလွတ်မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေအရ မြေလွတ်မြေရိုင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဗဟိုအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက် ပူးတွဲတင်ပြရန်။
သစ်တောမြေတွင် စိုက်ပျိုးရန်ဖြစ်ပါက သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ခွင့်ပြုစာပူးတွဲ တင်ပြရန်။
15) သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀၀% ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိပါသလား?
သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀၀% ဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။ သဘာဝတောမှထွက်ရှိသည့် သစ်ကုန်ကြမ်းအသုံးပြုသည့် သစ်အခြေခံစက်မှု လုပ်ငန်း များအား အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၈၆/၂၀၁၇ ဖြင့် ယာယီ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
16) သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အဆိုပြုလွှာတင်ပြရာတွင် မည်သည့် အချက်အလက် များ လိုအပ်ပါသနည်း?
သစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံပါ အချက်များအပြင် အောက်ပါအထောက်အထားများ ဆောင်ရွက်ရပါမည်-
သစ်ကုန်ကြမ်း ရယူသုံးစွဲမည့် အခြေအနေ တင်ပြရန်။
မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ကိုယ်ပိုင်သစ်စိုက်ခင်း တည်ထောင် စိုက်ပျိုး မည့် အစီအစဉ်တင်ပြရန်။
17) သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သော သစ်ကုန်ကြမ်းကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့် ရှိပါသလား?
ပြည်တွင်းမှ မရရှိနိုင်သော သစ်ကုန်ကြမ်းကို ပြည်ပမှ တင်သွင်းခွင့်ရှိပါသည်။
18) အစားအစာ ထုတ်လုပ်ရန် အတွက် အဆိုပြုလွှာတင်ပြရာတွင် အခြားမည်သည့်အချက်များ လိုအပ်ပါသလဲ?
အစားအစာထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အဆိုပြုချက်နှင့်အတူတင်ပြရမည့် အထောက်အထားများ အပါအဝင် အောက်ပါ အထောက်အထားများကိုလည်းတင်ပြရမည်-
သုံးစွဲမည့် ကုန်ကြမ်းအမျိုးအစားတို့ကို တင်ပြရပါမည်။
19) စားသောက်ကုန်များထုတ်လုပ်တဲ့အခါ နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ ဖက်စပ်စနစ်နဲ့သာ လုပ်ကိုင် ခွင့်ရှိကြောင်းသိရပြီး ဘယ်အချိုးစားနဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ရှိပါ သလား?
စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်-၁၅/၂၀၁၇တွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် နိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းဆုံး ၂၀% ပါဝင်သည့် ဖက်စပ်စနစ်ဖြင့်သာ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ ဖော်ပြပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာတွင် မပါဝင်သည့် အခြားသော လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အချိုးကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
20) နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ငန်းကို နိုင်ငံခြားသားများ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်း ခွင့်ပြုတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကုန်ကြမ်းအတွက် လိုအပ်မယ့် နို့စားနွားမွေးမြူခြင်း လုပ်ငန်းကို တွဲဖက်လုပ် ကိုင် လို့ရပါသလား?
နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ငန်းတွင်လိုအပ်သော ကုန်ကြမ်းအတွက် နွားမွေးမြူခြင်းအား တွဲဖက် ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
21) အရက်ဘီယာ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ခွင့်ပြုပေးပါသလား။	အရက်၊ဘီယာစသည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ရှင်းပြပါ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း ပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ခွင့်ပြုပါ သလား?
အရက်ဘီယာ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လိုပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်သို့ ကြိုတင်တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁၅/၂၀၁၇အရ အရက်ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို လျှောက်ထားခွင့်ရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့် လိုင်စင်များလိုအပ်ပါသဖြင့် ၎င်းဌာနများ သို့ ကြိုတင် စုံစမ်း သင့်ပါသည်။ အမိန့်ကြော်ငြာ စာ ၁၅/၂၀၁၇ အရ အရက်၊ ဘီယာ စသည့် လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံသားပိုင်ဆိုင်မှု အနည်းဆုံး ၂၀%ပါဝင်သည့် ဖက်စပ် စနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
22) အရက်၊ဘီယာအတွက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊သက်သာခွင့် သီးခြားပြဋ္ဌာန်းချက်ရှိပါသလား?
အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၅၁/၂၀၁၄ အရ အရက်၊ ဘီယာနှင့် အလားတူ ကုန်ပစ္စည်း များအတွက် အကောက်ခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွှတ်ခွင့် သက်သာခွင့် မပေးပါ။
23) စည်သွပ်ဘူးလုပ်ငန်းကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ခွင့်ရှိပါသလား?
စည်သွပ်ဘူးလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်စနစ် ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါသည်။
24) မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့်အအေးခန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းများအဆိုပြုချက်တင်ပြရန်အတွက် မည်သည့်အချက်တွေ လိုအပ်ပါမည်နည်း?
မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့် အအေးခန်းစက်ရုံလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါက အဆိုပြုချက် နှင့်အတူ တင်ပြရမည့် အထောက်အထားများအပြင် ရေဆိုးစွန့်ပစ်သည့်အစီအမံ (Waste Water Treatment) ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ် တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
25) မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက် ခွင့်ရှိပါသလား?
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၅/၂၀၁၇ အရ မွေးမြူးရေးလုပ်ငန်းကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့် ဖက်စပ်ပုံစံဖြင့် ဖြစ်စေ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
26) ပြည်ပမှငါးမိခင်မျိုးရင်းများ တင်သွင်း၍ ပြည်တွင်းမှာ ငါးသားပေါက်များ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိပါသလား?
အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁၅/၂၀၁၇ အရ ပြည်ပမှငါးမိခင်မျိုးရင်းများ တင်သွင်း၍ ပြည်တွင်းမှာ ငါးသားပေါက်များ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၁၀၀% ခွင့်ပြုပါသည်။
27) ငါးအအေးခန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုံမှန် စနစ်နှင့် လက်ခစားစနစ်ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း?
ငါးအအေးခန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပုံမှန် စနစ်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ကုန်ကြမ်းဖြစ်သော ငါးပုစွန်များကို ပြည်တွင်းမှ ဖမ်းဆီး၍ လည်းကောင်း ပြည်ပမှ တင်သွင်း၍ လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ပြီးပြည်တွင်း/ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
လက်ခစားစနစ်ဆိုသည်မှာ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ၏ ငါးပုစွန်များကို စက်ရုံတွင် လက်ခစား စနစ်ဖြင့် သန့်စင်ထုပ်ပိုး သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။
28) စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေး၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပြုလွှာနှင့်အတူ ပါရှိရမည့် အချက်အလက်များ
အဆိုပြုချက် တင်ပြရာတွင် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်ရပါမည်-
လုပ်သားများ၏လူမှုဖူလုံရေး၊ သက်သာချောင်ချိမှု၊ CSR ၊ မီးငြိမ်းသက်မှုအစီအစဉ်
29) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဌာနခွဲ (၃) က ဘယ်လို ကဏ္ဍများကို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ရပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနခွဲ (၃) က အောက်ပါကဏ္ဍများကို ဆောင်ရွက်ရပါ တယ်-
စက်မှုဇုန်နှင့် မြို့ပြသစ် တည်ဆောက်ရေးကဏ္ဍ
30) အဆိုပါကဏ္ဍများမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါ သလား?
ယေဘူယျအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အမိန့် ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၃/၂၀၁၇ အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေး ကဏ္ဍမှာပါဝင်ပြီး အိမ်ရာအဆောက်အဦကဏ္ဍ ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါ က တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှသာလျှင် အခွန်ကင်း လွတ်ခွင့်များ လျှောက်ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
31) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ရေးကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များမှာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိနိုင်ပါသလား?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက လျှောက်ထား တင်ပြလာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၇၅၊ ၇၇ နှင့် ၇၈ တို့အရ ကော်မရှင်မှ စိစစ်ခွင့် ပြုနိုင်ပါသည်။
32) ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သက်သာခွင့်များမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တည်နေရာအလိုက် ကွဲပြားမှု ရှိပါသလား?
ရှိပါသည်- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၇၅(က)တွင်ပါဝင်သော ဝင်ငွေ ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်တိုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁၀/၂၀၁၇ တွင် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်အတွက် ဇုန် (၃) ဇုန် သတ်မှတ်ထားရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုဇုန် အတွက် (၃) နှစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အသင့်အတင့်ရှိသော ဇုန် အတွက် (၅) နှစ်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးသောဇုန်အတွက် (၇) နှစ် လျှောက်ထား တင်ပြနိုင် ပါသည်။ ကော်မရှင်မှ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။
33) မည်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများက အဆိုပြုချက် တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက တင်ပြလာသည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများကို မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆အရ တိုက်ဆိုင်စိစစ်၍ ကိုက်ညီမှုရှိလျှင် အဆိုပြုချက် တင်ပြရမည်ဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ၃၆နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသော အောက်ပါလုပ်ငန်းများသည် အဆိုပြုချက် တင်ပြ ရမည်-
(က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ အထက် လုပ်ငန်းများ
(ခ)ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသခံလူထုအပေါ် ကြီးမားစွာအကျိုး သက်ရောက်မှုရှိသော လုပ်ငန်းများ
(ဂ) နိုင်ငံတော်အတွက် ဗဟာဗျူဟာအရ အရေးပါသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ
(ဃ)နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦများ အသုံးပြုသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
(င) ကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက် တင်ပြစေရန် အစိုးရအဖွဲ့က သတ်မှတ်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
34) မည်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများက အတည်ပြု ချက် တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသလဲ?
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆ နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသော လုပ်ငန်းများသည် အတည်ပြုချက် တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
35) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ခွင့်ပြု မိန့်ရရှိရန် ရက်ပေါင်း မည်မျှ ကြာပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကတင်ပြလာသော အဆိုပြုချက်ကို ကော်မရှင်မှ စိစစ်လက်ခံ၍ ရက်ပေါင်း ၆၀ အတွင်း ခွင်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရပါသည်။
36) မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုမိန့်ရရှိရန် ရက်ပေါင်း မည်မျှ ကြာပါသလဲ?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကတင်ပြလာသော အဆိုပြုချက်ကို ကော်မရှင်မှ စိစစ်လက်ခံ၍ ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးရပါသည်။
37) မည်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများမှာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန အဖွဲ့အစည်းများက တစ်ဆင့် တင်ပြရန်လိုအပ်ပါသလဲ?
ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁၅/၂၀၁၇ အရ ကန့်သတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းစာရင်းတွင် ပါဝင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှ တစ်ဆင့်တင်ပြရန် သတ်မှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်များစာရင်းတွင် ပါဝင်ပါက တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
38) မည်သည့် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများက နိုင်ငံခြားသား ရာခိုင်နှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသလဲ?
ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁၅/၂၀၁၇ (ဂ) အရ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင် ရမည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းတွင် မပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံခြားသား ရာခိုင်နှုန်းပြည့် လုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။
39) မြန်မာနိုင်ငံသား သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျှင် ရှယ်ယာအချိုး မည်သို့ ထည့်ဝင်ရန် လိုအပ်ပါသလဲ?
ကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၁၅/၂၀၁၇ (ဂ) အရ နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် နိုင်ငံသားပိုင်လုပ်ငန်းနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ရမည့် လုပ်ငန်းများစာရင်းတွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံခြားသား ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း စီ ထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။
40) အလုပ်သမားခန့်ထားမှု အခြေအနေ ရှင်းပြပေးနိုင်ပါသလား?
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီသည့် မည့်သည့် နိုင်ငံသားကိုမဆို အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် အကြံပေးအဖြစ် ဥပဒေများနှင့်အညီခန့် ထားနိုင်ပါသည်။
အဆင့်ဆင့်သော စီမံခန့်ခွဲမှု၊ နည်းပညာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူ နေရာ တွင် နိုင်ငံသားများခန့်ထားနိုင်ရန် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး အစီ အစဉ်များ ဆောင်ရွက်၍ အစားထိုးခန့်ထားနိုင်ပါသည်။
ကျွမ်းကျင်မှု မလိုသော လုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံသားများကိုသာ ခန့် ထားရမည်။
41) ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ရှာဖွေ၊ တူးဖော်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အဆိုပြုလွှာတင်ပြရန် လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြပေးပါ။
လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ရပါမည်။ အဆိုပြုချက် ပုံစံများကို www.dica.gov.mm မှာ ရယူနိုင်ပါသည်။
42) စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများတွင် Upstreams Industries များ၏ တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက် အလက်များ ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ သိရှိလိုပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များအား ဝန်ကြီးဌာနတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ တင်ဒါခေါ်ယူမှု အား လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၏ Website တွင် ဝင်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။
43) အကြီးစား လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ရာခိုင်နှုန်းပြည့်နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံး သဘောထား မှတ်ချက်နှင့်အညီ ပြင်ဆင် ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူရေး စာချုပ်(မူကြမ်း)နှင့်အတူ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် အဆိုပြုချက် တင်ပြရပါမည်။
44) လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများသည် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့် ခံစားနိုင်ခြင်း ရှိ/ မရှိ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက လျှောက်ထားလာပါက မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဉပဒေ ပုဒ်မ (၇၅) ၊(၇၇) နှင့် (၇၈) တို့အရ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်၊သက်သာခွင့် ခံစားနိုင်ပါသည်။
45) သတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိ - မရှိ။
အကြီးစားသတ္တုတူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသာရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီး၊ ဓာတ်သတ္တုအသေးစားနှင့် အလတ်စားထုတ်လုပ်ခြင်းကိုနိုင်ငံသားများသာဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
46) သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အဆိုပြုလွှာတင်ပြရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် ကိုသိလိုပါတယ်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြရပါမည်။ အဆိုပြုလွှာတွင် ပါဝင်ရမည့်အသေးစိတ်အချက်များကိုwww.dica.gov.mmတွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
47) သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ရာတွင်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် တင်ပြရန် လိုအပ်ခြင်းရှိ-မရှိ။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တစ်ဆင့် တင်ပြရန် မလိုပါ။
49) ကျောက်စိမ်း/ကျောက်မျက်ရတနာရှာဖွေခြင်း၊ စမ်းသပ်တိုင်းတာခြင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနိုင်ငံခြားသားများဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိ-မရှိ။
50) သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့် နှင့် သက်သာခွင့်များကိုရရှိနိုင်ခြင်းရှိ-မရှိ။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍတွင် မပါဝင်သဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်မရရှိနိုင်ပါ။
51) သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများအားအဆိုပြုချက် (သို့မဟုတ်) အတည်ပြုချက် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ခြင်းရှိ/မရှိ။
မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေ ၃၆ အရအဆိုပြုချက်ဖြင့် လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
52) ပုလဲမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဆိုပြုလွှာတင်ပြရမည် လုပ်ငန်းစဉ် ကိုသိလိုပါတယ်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် အဆိုပြုလွှာ တင်ပြ ရ ပါမယ်။ အဆိုပြုလွှာမှ ပါဝင်ရမဲ့ အသေးစိတ်အချက်များကိုwww.dica.gov.mmမှာယူပါ။
53) ပုလဲမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ခံစားရရှိနိုင်သည့် အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့် နှင့် သက်သာခွင့်များကိုသိရှိလိုပါတယ်။
ပုလဲမွေးမြူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် ဦးစားပေးမြှင့်တင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍတွင် ပါဝင် သဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
54) International School များအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိ-မရှိ။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
55) ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်း၊ ပုဂ္ဂလိဆေးခန်းလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
56) လက်လီရောင်းချခြင်း၊ လက်ကားရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘော ထားကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါမည်။
57) မီနီမားကတ်၊ Convenience Store ကို နိုင်ငံခြားသားများ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
ကြမ်းခမ်းဧရိယာ (၁၀,၀၀၀ စတုရန်းပေ) သို့မဟုတ် (၉၂၉ စတုရန်းမီတာ) အောက် လုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိပါ။
58) Warehouse, Bonded Warehouse Services လုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
59) ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
60) အမှိုက်သိမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ခွင့် ရှိ-မရှိ။
61) ရုပ်ရှင်ကားထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရုပ်ရှင်ပြသခြင်းလုပ်ငန်းများအား ရာခိုင်နှုန်းပြည့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
62) နိုင်ငံခြားဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသော အချိန်မှန်ထုတ် သတင်းစာများ ထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
63) ပြည်တွင်းပြည်ပ စာပို့တိုက်လုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင် ခြင်း ရှိ-မရှိ။
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
64) FM ရေဒီယိုအစီအစဉ်များ ထုတ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိ-မရှိ။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
65) ရုပ်သံထုတ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း ရှိ-မရှိ။
66) ဧည့်လမ်းညွှန်လုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခွင့် ရှိ-မရှိ။
67) ပြည်တွင်းခရီးစဉ်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက် နိုင်ခွင့် ရှိ-မရှိ။
68) ရထားပြေးဆွဲခြင်းလုပ်ငန်းအား နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ရှိ-မရှိ။
ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သဘောထား မှတ်ချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
1) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုရင် အဓိကကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်တွေက ဘာတွေလဲ?
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း တစ်ခုခုသည် စီးပွားဖြစ် စတင်သောနှစ် အပါအဝင် တစ်ဆက်တည်း ငါးနှစ်အတွက် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
- လုပ်ငန်းမှရရှိသည့် အမြတ်ငွေကို ပြန်လည် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံရန်အတွက် သီးသန့် ရန်ပုံငွေထား၍ တစ်နှစ် အတွင်း ယင်းလုပ်ငန်း၌ ပြန်လည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လျှင် ထိုအမြတ်ငွေ အပေါ်တွင် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
- ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ရန်ကိစ္စ အတွက် စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာ၊ အဆောက်အအုံ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းသုံး အခြားမတည် ပစ္စည်းများ အပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်က သတ်မှတ်ထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုး လျော့တွက်နှုန်းများ အတိုင်း တွက်ချက်ပြီး ပစ္စည်း တန်ဖိုး လျော့တွက်ငွေကို အမြတ်ငွေထဲမှ နုတ်ပယ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
- ကုန်ထုတ် လုပ်ငန်း တစ်ခုခုက ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းကို ပြည်ပသို့ တင်ပို့ ရောင်းချ၍ ရရှိသော အမြတ်ငွေအပေါ်တွင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဝင်ငွေခွန် သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။
- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အမှန်တကယ်လိုအပ်၍ ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကို အခွန် စည်းကြပ် ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့်ပြုနိုင်သည်။
- ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့် ခံစားပြီး တစ်ဆက်တည်း နှစ် နှစ်အတွင်း အမှန်တကယ် ပေါ်ပေါက်သည့် အရှုံးငွေကို ယင်းသို့ အရှုံးပေါ်ပေါက်သည့် နှစ်မှစ၍ တစ်ဆက်တည်း သုံးနှစ်ကာလ အထိ သယ်ယူခုနှိမ်ခွင့်နိုင်သည်။
- လုပ်ငန်း တည်ဆောက်မှု ကာလအတွင်း အမှန် တကယ် အသုံးပြုရန် လိုအပ်၍ တင်သွင်းသော စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အသုံး အဆောင် တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ် အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ အပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြားပြည်တွင်း အခွန်အကောက်များ ဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို ဖြစ်စေ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
- လုပ်ငန်း တည်ဆောက်မှု ပြီးစီး၍ ပထမ သုံးနှစ် အတွက် ကုန်ထုတ်လုပ်ရန် တင်သွင်းသည့် ကုန်ကြမ်းများ အပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြား ပြည်တွင်း အခွန်အကောက် များဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးလုံးကို ဖြစ်စေ၊ ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်၊
- ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရန် ထုတ်လုပ်သည့် ပစ္စည်းများ အပေါ် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မ ဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။
- နိုင်ငံခြားသားများ၏ ဝင်ငွေအပေါ်တွင် ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားများ ပေးဆောင်သည့် ဝင်ငွေခွန် နှုန်း ထားများအတိုင်း ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခွင့်၊
1) နိုင်ငံခြားသားပညာရှင်တွေေ တိုးမြှင့်ခန့်ထားချင်တဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေနှင့် တင်ပြ လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ထပ်မံခန့်အပ်ဖို့ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များနှင့် တင်ပြ လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်-
(က) ကုမ္ပဏီတင်ပြစာ(ခန့်အပ်မည့် လူဦးရေ အပါအဝင် အကြောင်းပြချက် ပြည့်စုံစွာ ဖြင့်တင်ပြရန်)
(ဃ) အဆိုပြုချက်ပါ၊တိုးမြှင့်မည့် အရေအတွက်နှင့် လက်ရှိခန့်ထားပြီးအခြေအနေ နှိုင်း ယှဉ်ဇယား (ပြည်တွင်း/ပြည်ပ)
(င) လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ထားခြင်းရှိ မရှိ
(စ) နောက်ဆုံးတင်ပြထားသည့် သုံးလပတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီရင်ခံစာ (တင်ပြ ထားခြင်း မရှိသေးပါက)
2) အဆိုပြုချက်ပါ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ခန့်အပ်ရန်အတွက် ဘယ်အချက်တွေနဲ့ တင်ပြလျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ခန့်အပ်ဖို့ဆိုရင် အောက်ပါအချက်များနှင့် တင်ပြ လျှောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်-
(က) ကုမ္ပဏီတင်ပြစာ (ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၊ ရန်ကုန်မြို့သို့ လိပ်မူ၍ ဝန်ထမ်းအမည်၊ Passport No.၊ နိုင်ငံသား၊ ရာထူး၊ ခန့်ထားမည့်ကာလ၊ ပညာအရည်အချင်းဖော်ပြရန်)၊
(ဂ) ငွေသွင်းအကြောင်းကြားလွှာ (တင်ပြစာတစ်စောင်လျှင် ဝန်ဆောင်ခ ကျပ် ၅၀၀၀ ပေးသွင်းရန်)၊
(င) အဆိုပြုချက်ပါ ပြည်တွင်း/ပြည်ပဝန်ထမ်းအင်အား စာရင်းမိတ္တူ၊
(စ) လက်ရှိခန့်ထားပြီး ပြည်တွင်း/ပြည်ပဝန်ထမ်းအင်အား (ပြည်တွင်း ဝန်ထမ်းများ အား စီမံခန့်ခွဲမှုအဆင့်၊ ကျွမ်းကျင်အဆင့်၊ သာမန်အဆင့် စသည်ဖြင့် ရာထူးနှင့် အရေအတွက် ဖော်ပြရန်နှင့် ပြည်ပဝန်ထမ်းအမည်၊ Passport No.၊ ရာထူး၊ နိုင်ငံ သားဖော်ပြ၍ ကော်မရှင်မှခန့်ထားခွင့်ပြုခဲ့သည့် အထောက်အထားများ ပူးတွဲ တင်ပြရန်)၊
(ဆ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့် သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ (ပုံစံ-၁၀)၊
(ဇ) ခန့်ထားခွင့်တင်ပြသည့် နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်း၏ ကျွမ်းကျင်မှုအထောက်အထား (ဒီပလိုမာ) (သို့) ဘွဲ့လက်မှတ်၊ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊
(စျ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်) (Investor ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက)၊
(ည) ခန့်ထားခွင့်တင်ပြရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိပြီး အလုပ် လုပ်ရက် (၇)ရက် အတွင်း ကော်မရှင်သို့ အလုပ်ခန့်ထားခွင့်တင်ပြရန် ဖြစ်ပါသည်။
3) ခန့်ထားခွင့်ရမဲ့ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် ကော်မရှင်ကနေ နေထိုင်ခွင့် အနည်းဆုံးဘယ်လောက်နှင့် အများဆုံးဘယ်လောက်ခွင့်ပြုပါသလဲ-
၆ လ ဖြစ်ပါတယ်။
4) အဆိုပြုချက်ပါ စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ပြည်ပကနေ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းချင်ပါတယ် MICကို ဘာတွေတင်ပြပြီး လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ပြည်ပကနေ အခွန်အကောက် ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် တင်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ယင်းပစ္စည်းတွေက မူလအဆိုပြုချက်မှာ ပါရှိ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကော်မရှင်ရုံးကို လျှောက်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအချက်တွေလိုပါတယ်-
(က) ကုမ္ပဏီ၏ Letter Head ဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရေးသားထားသောပစ္စည်းလျှောက်လွှာ
(ခ) ပုံစံ (၆) (မတည်ငွေရင်းအလိုက် ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းရန်)
(ဂ) ပြည်ပမှ တင်သွင်းမည့်ပစ္စည်းစာရင်း
(ဃ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်) (Investor ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက)
5) စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ပြည်ပကနေ တင်သွင်းချင် ပါတယ် MIC ကို ဘာတွေတင်ပြပြီး လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
စက်ပစ္စည်း၊ စက်ကိရိယာနှင့် လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို ပြည်ပကနေ တင်သွင်းချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကော်မရှင်၏ တင်သွင်းခွင့်ပြုချက်မှာ ပါရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကော်မရှင် ရုံးကို လျှောက်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအချက်တွေလိုပါတယ်-
(ခ) Proforma Invoice
(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနထောက်ခံချက် (လိုအပ်ပါက)
(စ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်) (Investor ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက)
(ဆ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်၃လပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ပုံစံ-၁၀) (မတင်ပြရသေးပါက)
6) ကနဦးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ဖြင့် ပြည်ပကနေ တင်သွင်းချင် ပါတယ် MIC ကို ဘာတွေတင်ပြပြီး လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
ယင်းပစ္စည်းတွေက မူလအဆိုပြုချက်မှာ ပါရှိ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကော်မရှင်ရုံးကို လျှောက်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအချက်တွေလိုပါတယ်-
(ဂ) Proforma Invoice
(ဃ) မူလအဆိုပြုချက်ပါ ကုန်ကြမ်းစာရင်း
(င) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ လက်မှတ်၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ်) (Investor ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက)
(စ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်၃လပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ(ပုံစံ-၁၀) (မတင်ပြရသေးပါက)
7) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးမြှင့်ဖို့အတွက် ကော်မရှင်ကို ဘာတွေတင်ပြပြီး လျှောက်ထား ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကော်မရှင်သို့ အောက်ပါအချက်များဖြင့် တိုးမြှင့်ခွင့် တင်ပြလျောက်ထားရန် လိုအပ်ပါတယ်-
(က) လျှောက်ထားသည့်စာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရခြင်းအကြောင်း၊ မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ၊ တိုးမြှင့်လိုသည့်ပမာဏနှင့် စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ)
(ခ) ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် (မူရင်း)
(ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရာတွင် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ တင်သွင်းလိုပါက တင်သွင်းမည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာစာရင်းကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်။ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျော့ချရန် တင်ပြ လိုပါက မူလနှင့် တင်သွင်းပြီး၊ ကျန်ရှိသည့် စက်ပစ္စည်းစာရင်းကို တင်ပြရန်)
(ဃ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ (ပြင်ဆင်ချက်)
(င) ထည့်ဝင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံ (ဇယားဖြင့်)
(စ) ချေးငွေသဘောတူညီချက်စာချုပ် မူကြမ်း (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို ချေးငွေနှင့် တိုးမြှင့်လို လျှင်)
(ဆ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
(ဇ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ - ပုံစံ (၁၀) (တင်ပြရခြင်း မရှိသေးပါက)
8) လုပ်ငန်းတည်နေရာ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ကော်မရှင်ကို ဘာတွေတင်ပြ ပြီး လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းတည်နေရာ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခွင့် တင်ပြရာတွင် ကော်မရှင်သို့ အောက်ပါ အချက်များ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါတယ်-
(က) လျှောက်ထားသည့်စာ (အသေးစိတ်အကြောင်းအရာဖော်ပြထားသည့်)
(ဂ) မြေပုံ (မူလနှင့် တိုးချဲ့တည်နေရာ ဆက်စပ်မှုရှိပါက)
(ဃ) မူလမြေငှားစာချုပ် (လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မြေငှားသက်တမ်းရှိပါက ရပ်ဆိုင်းစာချုပ် တင်ပြရန်)
(င) တိုးချဲ့မည့်နေရာအတွက် မြေငှားစာချုပ် (မူကြမ်း)
(စ) တိုးချဲ့မည့်နေရာအတွက် မြေဂရန်
(ဇ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ - ပုံစံ (၁၀) (တင်ပြရခြင်းမရှိ သေးပါက)
9) လုပ်ငန်းကနေရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတွေကို သီးသန့်ရန်ပုံငွေထားပြီး အဲဒီလုပ်ငန်းမှာပဲ တစ်နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ကော်မရှင်ကို ဘာတွေ တင်ပြပြီး လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းကနေရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတွေကို သီးသန့်ရန်ပုံငွေထားပြီး အဲဒီလုပ်ငန်းမှာပဲ တစ်နှစ်အတွင်း ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် လိုအပ်တာတွေကတော့-
(က) လျှောက်ထားသည့်စာ (အမြတ်ငွေရရှိသည့်ဘဏ္ဍာနှစ်နှင့် ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မည့် ဘဏ္ဍာနှစ်ဖော်ပြရန်)
(ဂ) ပုံစံ (၆) (မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဉပဒေပုဒ်မ ၇၈ အရ ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားလိုပါက)
(စ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင်လျှင်)
(ဆ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ - ပုံစံ (၁၀) (တင်ပြရခြင်း မရှိသေး ပါက)
10) အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခွင့် တင်ပြရာတွင် ကော်မရှင်ကို ဘာတွေ တင်ပြပြီး လျှောက်ထား ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းခွင့် တင်ပြရာတွင် ကော်မရှင်သို့ အောက်ပါအချက်များတင်ပြရန် လိုအပ်ပါတယ်-
(ဃ) ပုံစံ (၈) (လိုအပ်သည့်အထောက်အထားများပူးတွဲရန်)
(င) အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်းစာချုပ် (မူကြမ်း)
(စ) အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက် (လိုအပ်ပါက အခြေပစ္စည်းလွှဲပြောင်းရောင်း ချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်းမှရရှိသည့် မြတ်စွန်းငွေအပေါ် ပေးဆောင်ရသည့် အခွန်ကိုပေး ဆောင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကတိခံဝန်ချက်)
(ဆ) ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူကိုယ်တိုင် ရုံးသို့မလာရောက်နိုင် လျှင်)
(ဇ) နောက်ဆုံးတင်ပြခဲ့သည့်သုံးလပတ်အစီရင်ခံစာမိတ္တူ - ပုံစံ (၁၀) (တင်ပြရခြင်း မရှိ သေးပါက)
(ဈ) မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဉပဒေ ၁၉၁၊ ၁၉၂ နှင့် ၁၉၃ တို့အရ ကတိကဝတ်ပြု ချက်
11) လုပ်ငန်းကနေရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတွေကို ပြည်ပကိုလွှဲနိုင်ဖို့အတွက် ကော်မရှင်ကို ဘာတွေ တင်ပြပြီး လျှောက်ထားရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းကနေရရှိတဲ့အမြတ်ငွေတွေကို ပြည်ပကိုလွှဲနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အချက်တွေ ကတော့-
(င) ပုံစံ (၁၃) (ဘဏ္ဍာငွေလွှဲပြောင်းခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားလွှာ)
12) စီးပွားဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်အား တင်ပြမည်ဆိုပါက မည်သည့်အချက်အလက်တွေလိုအပ်ပါသလဲ-
စီးပွားဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက်အား တင်ပြလိုပါက လိုအပ်တဲ့အချက်တွေ ကတော့-
ကုမ္ပဏီ၏တင်ပြစာ ( ပြည့်စုံစွာရေးသားဖော်ပြထားသော လျှောက်လွှာ)
လျှောက်ထားလွှာပုံစံ (၁၄) (စီးပွားဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ရက် တင်ပြခြင်း)
ပုံစံ -၆ ( ခွင့်ပြုမိန့်/ အတည်ပြုမိန့်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ရယူထားရှိ သည်ဆိုပါက)
ED အထောက်အထား၊ ပြည်တွင်းရောင်းပြေစာ၊ ဝင်ငွေအထောက်အထား
(သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ လိုင်စင်/ပါမစ်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခွင့်ပြုချက် (သစ်လုပ်ငန်း - သစ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်စင် ၊ ပုဂ္ဂလိက စက်မှုလိုင်စင်၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်)
မူလတင်သွင်းခွင့်ပြုစာရင်း၊ တင်သွင်းပြီးစာရင်း နှင့် တင်သွင်းရန်ကျန်စာရင်းများ နှိုင်းယှဉ်မှုဇယား ( Machinery/ Equipment /Construction Material Balance Sheet )
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(အမည် ၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ် ၊ လက်မှတ် ၊ ဆက်သွယ်ရမည့် ဖုန်းနံပါတ် ) ( Investor ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက)
13) တည်ဆောက်ရေးကာလ တိုးမြှင့်မည်ဆိုပါက မည့်သည့်အထောက်အထားများ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသလဲ-
တည်ဆောက်ရေးကာလ တိုးမြှင့်မည်ဆိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါတယ်-
ကုမ္ပဏီ၏ တင်ပြစာ (ခိုင်လုံသည့် အကြောင်းအရင်းဖော်ပြချက်)
စက်ရုံတည်ဆောက်ဆဲ ဓါတ်ပုံအထောက်အထားများနှင့် တည်ဆောက်ပြီစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းဖော်ပြချက်)
တင်သွင်းခွင့်ပြုစာရင်းနှင့် တင်သွင်းရန်ကျန်စာရင်းများ ( ကော်မရှင် ခွင့်ပြုစာအမှတ် )
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ(အမည်၊ မှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊လက်မှတ် ၊ ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ် ) ( Investor ကိုယ်တိုင် မလာရောက်နိုင်ပါက)
14) တည်ဆောက်ရေးကာလ စတင်သည့်နေ့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရာတွင် မည့်သည့်အချက်အလက်များ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသလဲ-
တည်ဆောက်ရေးကာလ စတင်သည့်နေ့ပြန်လည်သတ်မှတ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ တင်ပြရန် လိုအပ်ပါတယ်-
သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထံမှ တည်ဆောက်ခွင့်ပြုချက် ရရှိသည့် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ